6 Afei nna yi mu a na asuafo no redɔɔso no, Yudafo a wɔka Hela kasa+ no nwiinwii hyɛɛ Yudafo a wɔka Hebri kasa no, efisɛ na wɔabu wɔn ani agu wɔn akunafo so wɔ aduan a wɔkyekyɛ no daa no mu.+ 2 Enti dumien no frɛɛ asuafokuw no ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Ɛmfata sɛ yebegyaw Onyankopɔn asɛm hɔ akɔkyekyɛ aduan wɔ apon so.+ 3 Enti anuanom, mo ankasa monhwehwɛ+ mo mu mmarima baason a mubetumi adi wɔn ho adanse, nnipa a honhom ne nyansa ayɛ wɔn mã,+ na yɛmfa wɔn nsisi adwuma a ɛho hia yi so; 4 na yɛn de yebetu yɛn ho asi hɔ ama mpaebɔ ne Onyankopɔn asɛm no nkyerɛkyerɛ.”+ 5 Na nea wɔkae no tɔɔ nnipadɔm no nyinaa asom, na woyii Stefano, ɔbarima a gyidi ne honhom kronkron ayɛ no mã,+ ne Filipo+ ne Prokoro ne Nikanor ne Timon ne Parmena ne Nikolao, a ofi Antiokia a wasakra abɛyɛ Yudani no; 6 na wɔde wɔn begyinaa asomafo no anim, na wɔbɔɔ mpae wiei no, wɔde wɔn nsa+ guu wɔn so. 7 Na Onyankopɔn asɛm kɔɔ so trɛwee,+ na asuafo no dodow bu bɔɔ ho pii wɔ Yerusalem;+ na asɔfo+ no mu pii fii ase yɛɛ aso+ maa gyidi no. 8 Afei Stefano a adom ne tumi ayɛ no mã no yɛɛ anwonwade ne nsɛnkyerɛnne+ akɛse wɔ nnipa no mu. 9 Nanso nnipa bi a wofi nea wɔfrɛ no Ahofadifo Hyiadan no mu ne Kirenefo ne Aleksandriafo+ ne wɔn a wofi Kilikia+ ne Asia, sɔree sɛ wɔne Stefano rebedi anobaabae; 10 nanso wɔantumi annyina ne nyansa+ ne honhom a na ɔde kasa no ano.+ 11 Ɛnna wotutu guu nnipa bi asom sɛ wɔnka sɛ:+ “Yɛate sɛ ɔreka abususɛm+ atia Mose ne Onyankopɔn.” 12 Na wɔhwanyan nnipa no ne mpanyimfo no ne akyerɛwfo no ma wɔbaa no so mpofirim bɛkyeree no kɔmaa Sanhedrin no.+ 13 Na wɔmaa adansekurumfo+ bɛkae sɛ: “Ɔbarima yi nnyae nsɛm a ɔka tia kronkronbea yi ne Mmara no.+ 14 Hwɛ, yɛate sɛ ɔka sɛ Yesu yi a ɔyɛ Nasareni no bedwiriw beae yi agu fam na wasakra amanne a Mose de maa yɛn no.” 15 Bere a wɔn a wɔte Sanhedrin bagua no mu nyinaa hwɛɛ no dinn no,+ wohui sɛ n’anim te sɛ ɔbɔfo anim.+